जेलमा रहेका बालकृष्ण ढुंगेल गीत लेखनमा व्यस्त !
बैशाख ७, काठमाडौं ।
सदरखोर डिल्लिबजारमा माओवादी पूर्वसांसद बालकृष्ण ढुंगेल गीत लेखनमा व्यस्त छन् । थोरै बिरामी, धेरै सिर्जनशील बन्न थालेका उनी राजनीतिक मिजासमा कडा छन् । ६ महिनाअघि उनी सातदोबाटोबाट पक्राउ परेका थिए ।
युद्धकालमा रामेछापका उज्जनकुमार श्रेष्ठको ओखलढुंगामा भएको हत्याका हत्यारा साबित गर्दै उनलाई आजीवन कारावासको सजाय सुनाइएको थियो तर उनी फरार थिए । राजनीतिक संरक्षणमा खुलेआम हिँडे पनि उनी पक्राउ पर्न सकेका थिएनन् ।
सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश र पूर्वप्रधानन्यायाधीशको पिँडुलाको मासुसमेत छिल्न सकिने अभिव्यक्ति दिएपछि सर्वोच्च अदालत उनीमाथि आक्रमक भयो र आदेश दियो– सात दिनभित्र बालकृष्ण ढुंगेललाई पक्राउ गर्नू । १४ कात्तिक २०७४ मा प्रहरीले उनलाई पक्राउ ग¥यो ।
मंसिरको निर्वाचनपछि बहुमतमा बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री हुनासाथ माओवादी नेता रामबहादुर थापा सदरखोर गए ।
उनलाई बालकृष्णको पहिलो सुझाव थियो– जसरी पनि यहाँबाट निकाल्नुहोस्, बिरामी छु, औषधि समयमा खान पाएको छैन, खानाको राम्रो प्रबन्ध छैन । बालकृष्ण डाइबिटिज र मुटुका रोगी छन् ।
नियमित औषधि प्रयोग गर्छन् । बालकृष्णको यो आग्रह अब युद्धकालको घटनासँग मात्र होइन, एमालेसँग एकीकरण घोषणा बाँकी रहेको गठबन्धन दल नेकपा माओवादीको सर्त पनि बनेको छ । केही दिनअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गृहमन्त्री थापाले प्रधानमन्त्रीसामु प्रस्ताव राखे, ‘बालकृष्णलाई आममाफीको निर्णय गरौं ।’प्रधानमन्त्री ओलीले सिधै प्रस्तावलाई नकार्दै जवाफ दिए, ‘स्थितिलाई बिगार्ने प्रस्ताव नगर्नुस् ।’ थापाको प्रस्ताव सोचेर चाँडो निर्णय दिन माओवादी अध्यक्ष दाहालको पनि दबाब ओलीलाई परेको छ । प्रचण्डले बिहीबार पनि प्रधानमन्त्रीसँग एकताका अन्य प्रस्तावमा सहमति जुटाउने सन्दर्भसँग जोड्दै दाहालले भने, ‘बालकृष्णलाई कहिले निकाल्ने ?’
माओवादीले लोकतन्त्र वा गणतन्त्र दिवसका दिन उनलाई छुटाउन सरकारबाट सिफारिस हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । २०६१ सालमा नै जिल्ला अदालत ओखलढुंगाले कर्तव्य ज्यानमा दोषी ठहर गरी जन्मकैदको सजाय सुनाए पनि बालकृष्ण शान्ति सम्झौता र त्यसको प्रक्रियाका आधारमा थुना परेनन् । २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा उनी अत्यधिक मतले विजयी भई तत्कालीन व्यवस्थापिका–संसद् पनि छिरेका थिए ।
उनी सांसद रहेकै बेला सर्वोच्च अदालतले २०६६ सालमा जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेपछि फरार सूचीमा थिए । शक्तिकेन्द्रको बलमा उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको थिएन । पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालविरूद्ध नै रिट दायर भएपछि पक्राउ गरेर उनलाई सदरखोर पठाइएको थियो । केही दिनअघि मात्र बालकृष्णको रिहाइको दबाबमा ओखलढुंगामा रहेको स्व. श्रेष्ठको शालिक पनि तोडफोड गरिएको थियो ।
बालकृष्णले १२ वर्ष पाँच महिना २२ दिन जेल सजाय भुक्तान गर्नुपर्ने हुन्छ । गृहमन्त्री थापाले ओलीसामु प्रस्ताव राखे, ‘पार्टी एक हुँदैगर्दा शान्ति प्रक्रियाको मर्म सकिँदै गर्दा त्यस अन्तरालको घटनालाई अपराध भनेर जोड्न मिल्दैन, बालकृष्णको रिहाइ तत्काल गर्नका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष मन्त्रिपरिषद् निर्णय पठाइयोस् ।’माओवादी प्रवक्ता पम्फा भुसालले बालकृष्णको गिरफ्तारी नै गैरन्यायिक रहेको टिप्पणी गरेकी थिइन् । उनले भनेकी छन्, ‘यस्ता घटना सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट मिलाइनुपथ्र्यो, उहाँलाई जेल हालेर गलत गरिएको थियो ।’ विनोद ढकाल / राजधानी दैनिक